A gam akporo | December 2019
Mgbasa ozi Mgbasa ozi ọwa
Mgbasa ozi, ọtụtụ ndị ọrụ na-ewere ya dịka ihe otiti nke oge a. N'ezie - ihe ntanye ihuenyo zuru ezu nke a na-apụghị imechi, vidiyo na-enweghị mgbagha, ụmụ ahụhụ na-agba gburugburu na ihuenyo bụ ihe na-ewe iwe, ihe kachasị njọ bụ okporo ụzọ na ihe onwunwe nke ngwaọrụ gị. A na-ahazi ọtụtụ ndị na-akwado mgbasa ozi iji merie àgwà a na-ezighị ezi.
Otu esi achọta ụgbọ ala na Android ma hichaa ya
Imirikiti usoro nhazi nke desktọọpụ nwere mpaghara a na-akpọ "Nbibi Bin" ma ọ bụ analogs, nke na-arụ ọrụ nke ịchekwa faịlụ na-enweghị isi - a ga-eweghachi ha n'ebe ahụ ma ọ bụ kwụsị kpamkpam. Nke a ọ bụ na Google mobile site na Google? Azịza nke ajụjụ a bụ n'okpuru.
Kọwaa clipboard na gam akporo
Anyị na-ederịrịrịrị banyere ihe nkedo na desktọọpụ na Android os na otu esi arụ ọrụ na ya. Taa, anyị chọrọ ikwu banyere otu a ga-esi kpochapụ mmemme nke sistemụ arụmọrụ. Ihichapụ ihe nchekwa ederede Na ụfọdụ igwe, enwere nhọrọ nchịkọta clipboard: dịka ọmụmaatụ, Samsung na TouchWiz / Grace UI firmware.
Esi esi iṅomi QR code na Android
Onye ọ bụla na-eji ngwaọrụ mkpanaka dabere na gam akporo ka anụtụla banyere QR codes. Echiche ha yikarị kaadị ndị nkịtị: data ahụ ezoro ezo n'ime koodu abụọ dị n'ụdị onyinyo, mgbe nke a gasịrị, ngwaọrụ pụrụ iche nwere ike ịgụ ha. Na koodu QR, i nwere ike izochi ederede ọ bụla. Ị ga-amụta otú ị ga-esi nyochaa koodu ndị dị otú a na isiokwu a.
Otu esi eme ma ọ bụ gbanyụọ ntuziaka ederede na gam akporo
Maka mma nke ide ihe, keyboard nke smartphones na mbadamba na gam akporo na-arụ ọrụ ọrụ ntinye. Ndị ọrụ ndị na-ahụkarị "T9" na ngwaọrụ push-button, nọgidere na-akpọ ọrụ nke oge a na okwu na gam akporo. Ihe abụọ ndị a nwere nzube yiri nke ahụ, ya mere, n'isiokwu ahụ, anyị ga-atụle otu esi eme / gbanyụọ usoro nhazi nke ederede na ngwaọrụ nke oge a.
Weghachite ehichapụ faịlụ na gam akporo
Mgbe ụfọdụ, ọ na - eme na onye ọrụ na - ewepụghị data dị mkpa site na ekwentị gam akporo / mbadamba. A pụkwara ihichapụ data / mebiri emebi n'oge arụ ọrụ na usoro nje ma ọ bụ ọdịda usoro. N'ụzọ dị mma, ọtụtụ n'ime ha nwere ike weghachite. Ọ bụrụ na ịtọgharịa gam akporo na ntọala ntọala ma ugbu a, ị na-agbali iweghachite data ahụ na ya, mgbe ahụ ị ga-ada, n'ihi na nke a, a na-ehichapụ ozi ahụ kpamkpam.
Ngwa maka ịmepụta ncheta maka gam akporo
Anyị niile nwere ihe ndị anyị na-echefu mgbe ụfọdụ. Ibi n'ime ụwa nke jupụtara na ozi, anyị na-egbochikarị isi ihe - ihe anyị na-agbalị maka na ihe anyị chọrọ inweta. Ihe ncheta ọ bụghị nanị na ịbawanye arụpụta ihe, ma mgbe ụfọdụ, ọ bụ naanị nkwado na ọgba aghara kwa ụbọchị nke ọrụ, nzukọ, na ọrụ. Ị nwere ike ịmepụta ncheta maka gam akporo na ụzọ dị iche iche, gụnyere iji ngwa, nke kachasị mma anyị ga-atụle n'isiokwu taa.
GPS trackers maka gam akporo
Ná mmalite, ndị na-egwu GPS bụ ngwaọrụ pụrụ iche pụrụ iche nke na-enye gị ohere iji soro ihe mmasị na map. Otú ọ dị, n'ihi mmepe nke ngwaọrụ mkpanaka na ntinye nke nkà na ụzụ GPS n'ọtụtụ smartphones nke oge a, ọ bụ ugbu a zuru ezu iji dochie otu n'ime ngwa pụrụ iche maka gam akporo.
Ọbịbịa nke Android emeela ngwa na-echekwa ewu - ọrụ pụrụ iche ebe ndị ọrụ nwere ike ịzụta ma ọ bụ dị nata ngwa ọ bụla ha chọrọ. Ọrụ kachasị dị otú a bụ ma na-anọgide na Google Play Market - ahịa kachasị elu nke ndị niile dị. Anyị ga-ekwu taa banyere ihe ọ bụ.
Ụdị faịlụ faịlụ vidio
Ngwá ọrụ arụmọrụ gam akporo, dịka nsụgharị nke ngwaọrụ mkpanaka, adịlarị kemgbe ihe karịrị afọ iri, n'oge ahụ, ọtụtụ agbanweela na ya. Dịka ọmụmaatụ, ndepụta nke ụdị faịlụ na-akwado, gụnyere multimedia, amụbawo nke ukwuu. Kpọmkwem n'isiokwu a anyị ga-akọwa nke usoro osio a na-akwado OS a taa.
Ojiji zuru oke nke ọrụ nile nke ngwaọrụ Android nwere ike iche n'echiche na akaụntụ Google ejikọrọ na ya. Inwe akaụntụ dị otú ahụ ọ bụghị nanị na-enye ohere ịnweta ọrụ niile nke ụlọ ọrụ ahụ, kamakwa na-eme ka arụmọrụ nke ihe ndị ahụ dị na sistemụ arụmọrụ na-eziga ma nata data sitere na sava ahụ.
Nyefee data site na otu gam akporo gaa na ọzọ
Ngwa ngwa ngwa nke oge a na-aghọ ngwa ngwa, na mgbe ụfọdụ ndị ọrụ na-eche mkpa ọ dị ịnyefee data na ngwaọrụ ọhụrụ. Enwere ike ime nke a ngwa ngwa na ọbụna n'ọtụtụ ụzọ. Na-ebufe data site na otu gam akporo gaa na ọzọ Ọ dị mkpa ka ị gbanwee gaa na ngwaọrụ ọhụrụ na gam akporo os.
Ịtọ ụdaolu gị maka Samsung
Usoro 1: Ntọala niile nke ngwaọrụ Iji gbanwee ụdaolu site na ntọala ekwentị, mee ihe ndị a. Tinye ngwa "Ntọala" site na obere ụzọ na ngwa ngwa ma ọ bụ bọtịnụ dị na ákwà mpempe akwụkwọ. Mgbe ahụ, ị ​​ga-achọta ihe "Ụda na ọkwa" ma ọ bụ "Ụda na ụda" (dabere na ngwa ngwa na ngwa ngwaọrụ).
IPTV Player maka gam akporo
Ihe ngosi nke ọrụ IPTV na-enweta ngwa ngwa n'ike, karịsịa na ọbịbịa nke TV TV na ahịa. Ị nwekwara ike iji TV Ịntanetị na gam akporo - ngwa ngwa IPTV Player sitere na onye mmepụta Russian bụ Alexey Sofronov ga-enyere gị aka. Ndị na-egwu egwu na URL-njikọ Ngwa ahụ n'onwe ya anaghị enye ọrụ IPTV, ya mere usoro ahụ ga-ebu ụzọ tinye ndepụta listi.
YouTube Music maka gam akporo
Ọrụ ndị gụgharịrị na-aghọwanye ndị na-ewu ewu ma na-achọ n'etiti ndị ọrụ, karịsịa ma ọ bụrụ na ha bu n'obi maka ile vidio na / ma ọ bụ na-ege egwu. N'ihe banyere onye nnọchianya nke akụkụ nke abụọ, ma ghara ịnapụ ụfọdụ ike nke nke mbụ, anyị ga-agwa ya na isiokwu anyị taa.
Mepee PDF faịlụ na gam akporo
Ọdịdị nke PDF akwụkwọ bụ otu n'ime nhọrọ ndị nkesa kachasị ewu ewu maka e-akwụkwọ. Ọtụtụ ndị ọrụ na-ejikarị ngwaọrụ gam akporo ha dị ka ngwá ọrụ na-agụ akwụkwọ, ma n'oge na-adịghị anya ma ọ bụ mgbe e mesịrị ajụjụ ahụ na-ebute n'ihu ha - otu esi emeghe PDF akwụkwọ na ama ma ọ bụ mbadamba? Taa, anyị ga-eme ka ị mara nhọrọ ndị kachasị ewu ewu iji dozie nsogbu a.
Dọpụta Fit maka Android
Ọtụtụ ndị na-ebi ndụ dị mma, na-emega ahụ mgbe niile, na-eri nri. Site na ngwa Fit Fitter free, ị nwere ike ịtọ ọrụ maka oge ụfọdụ ma gbanwee mgbanwe n'ime ahụ gị site na ndekọ ndekọ. Ka anyị lebakwuo anya na usoro a. Ịmalite Malite Mgbe ị na-agba ọsọ mbụ, ịkwesịrị ịbanye data gị.
Otu esi gbanyụọ ihe mmetụta dị nso na gam akporo
Ejiri ihe odide dị nso na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị ọ bụla emepụta smartphones na-agba ọsọ na gam akporo arụmọrụ. Nke a bụ nkà na ụzụ bara uru ma dị mma, ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbanye ya, mgbe ahụ ekele maka oghere nke android os, ị nwere ike ime ya n'enweghị nsogbu ọ bụla. N'isiokwu a, anyị ga-agwa gị otu esi egbusi nke a.
Otu n'ime obere nnupụisi nke Osis na-arụ ọrụ nke oge a bụ mmelite nke usoro nkesa ngwa. E kwuwerị, mgbe ụfọdụ ị na-enweta ihe omume a chọrọ ma ọ bụ egwuregwu ụmụaka na Windows Mobile, Symbian na Palm OS nwere nnukwu nsogbu: ọ kachasị mma, ụlọ ọrụ gọọmentị nwere ike ịbụ usoro ịkwụ ụgwọ, nke kachasị njọ - ndị na-eme ihe ike.
Gbanwee olu site na injinia usoro na Android
A na-eme ihe ọ bụla dị na ikpo okwu Android n'ụzọ dịka iji mee ka ajụjụ kachasị dị mfe site na ndị ọrụ mgbe ị na-eji ya. Otú ọ dị, n'otu oge ahụ, ọtụtụ nzobe zoro ezo dị iche iche site na nyochaa na Windows, na-enye gị ohere ịmeghe ikike zuru ezu nke ama gị. N'isiokwu a, anyị ga-eleba anya iji gbanwee olu site n'iji menu ihe injinịa.